२२ वर्षीय युवाका ३ जना पत्नी रोचक त त्यहाँ छ अब ३ पत्नीहरूनै चौथोका लागि नयाँ सौता खोज्दै ! – ABC NEWS 24
काठमाडौं । विवाहलाई लिएर आजका मानिसहरु एकदम चनाखो बन्ने गरेको छन् । आजको युगमा जहाँ मानिसहरु विवाह पछि परिवारको नियन्त्रणमा जोड दिन्छन् । वर्तमान मूल्य वृद्धिको युगमा, पाकिस्तानका २२ वर्षीय अदनानको कथा अलिक फरक छ । उनले तीन विवाह गरेका छन, चौथो बिहेका लागि तयारी भइरहेको छ ।पाकिस्तानी शहर सियालकोटका निवासी अदनानले २२ वर्षको उमेरमा तीन विवाह गरेका छन् र अब चौथोको तयारीमा छन् । अच्चमलाग्दो कुरा के छ भने ती अदनानको चौथो बिहेका लागि उनका तीन पत्नीहरू नै नयाँ सौता खोज्दैछन् । आज, मानिसहरूले विवाहलाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गर्छन्, त्यसैले चौथो विवाहको कुरा आश्चर्यको रूपमा आएको छ ।
वास्तवमा, पाकिस्तानी युवा अदनान र उनका तीन श्रीमतीहरु र चार बच्चाहरूको कथा दैनिक पाकिस्तान ग्लोबल यूट्यूब च्यानमा अपलोड गरिएको एक भिडियोमा सबै प्रष्ट भएको हो । यो भिडियो एकाएक भाइरल भएको छ ।सियालकोट निवासी अदनानको पहिलो विवाह १६ वर्षको उमेरमा भएको थियो । अब उनी चौथो बिहेका लागि तयारी गरिरहेका छन् । गत वर्ष अदनानले तेस्रो बिहे गरेका थिए । अदनानको दोस्रो विवाह २० वर्षको उमेरमा उनी कलेजमा हुँदा भएको थियो । उनका अहिले ४ सन्तान रहेका छन् ।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने, अदनानका तीन पत्नीहरूको नाम अंग्रेजी वर्णमालाको एसबाट शुरू हुन्छ । अदनानको पहिलो श्रीमती शम्बुल, दोस्रो पत्नीको नाम शुबाना र तेस्रो पत्नीको नाम शाहीदा बताइएको छ । तीनजना अदनानका पत्नीहरू सँगै अब अदनानको चौथो बिहेका लागि युवती खोज्दैछन । चौथो युवतीको नाम पनि एसबाट शुरू हुनुपर्छ ।सबैको दिमागमा चलिरहेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आजको मुद्रास्फीतिमा अदनानले तीन पत्नी र चार बच्चाहरूलाई कसरी पालिरहेका छन् । अदनानसँग यसको पनि उत्तर छ ।अदनानका अनुसार ऊ आफ्ना तीन पत्नीहरूलाई खुशी राख्छन् । यूट्यूबमा अपलोड गरिएको भाइरल भिडियोमा अदनानले तीन पत्नीहरू आफुसँग धेरै नजिक रहेको बताएका छन् । किनकि उनलाई तीनै पत्नीले जहिले पनि समान प्रेम गर्दछन् ।
रोचक कुरा, यो देउरानी–जेठानी भएको घरमा बस्न प्रायः गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै एकदसेरका छोरा भए पनि अदनानका तीन पत्नीहरू वास्तविक बहिनीहरूको रूपमा बस्छन् । अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दा अदनानका तीन पत्नीहरू भन्छन् कि उनीहरू सबै मिलेर अदनानलाई खुशी पार्छन् र उनको सबै काममा योगदान दिन्छन् ।अन्तर्वार्ताको क्रममा जब अदनानलाई तीन पत्नीहरूको आक्रोश बढ्यो भने के हुन्छ ? अदनान भन्छन् कि उनी यस विषयमा अत्यन्त भाग्यवान छन्, किनकि उनका तीन पत्नीहरू मध्ये एक जनाले पनि विवाद गर्दैनन् र एक अर्कासँग मिलेर बस्छन् ।
अदनान भन्छन कि उनकी पहिलो पत्नी शुम्बलले उनलाई दोस्रो बिहे गर्न दिइन् । दोस्रो श्रीमतीले शाहिदालाई तेस्रो बिवाह गर्न अनुमति दिएकी हुन् । अब ती तीनजना मिलेर चौथो बिहेका लागि एउटी केटी खोज्दैछन् ।अदनान भन्छन्, ‘म वास्तवमा तीन पत्नीहरूको विवाह पछि बढेको छु र व्यापारमा नाम कमाएको छु ।’ चारजना बच्चाका बुबा अदनान स्पोर्ट्स कारहरू किनबेच गर्ने व्यवसायमा छन् ।अदनानले तिनीहरू तीन जना पत्नीहरूसँगै किनमेल गर्न जान्छन् । अदनानका अनुसार ती तीन पत्नी र चार बच्चाहरूलाई पाल्न प्रतिमहिना डेढ लाख रूपैयाँ खर्च गर्छन ।आफ्नो व्यबसायबाट यो सबै पुरा भइरहेको उनको दावी छ । कार किनबेचको मोलमोलाईमा तीन श्रीमती नै साथ लिएर जान्छन् । उनीहरुको मुस्कान, बोल्ने शैलीले नै व्यपार झनै फैलिरहेको छ । व्यपार राम्रो भइरहेको छ । सबै मिलेर खाइरहेका छन् भने बिबाह किन नगर्ने अदनान उल्टै प्रश्न गर्छन् ।
← पेट दुखेर अस्पताल पुगेकी १८ वर्षीया युवतीको पेटमा कपाल नै कपाल…
बि’हानै आयो सा*ह्रै दु’खद ख’बर : स’ञ्चार’कर्मी ला*मिछा’नेको मृ*त्यु →